1953-1967 Evinrude जनसन 3HP Litetwin Ducktwin धुन-अप प्रक्रिया | जहाज को बाहिर नाउ मोटर मर्मत
यो मत्स्य पालन लिनुहोस्!
1953-1967 Evinrude जनसन 3HP Litetwin Ducktwin धुन-अप प्रक्रिया
यो परियोजनाको लागि मोटर मोडेल 3303S सिरियल बी 18010 छ।
यो एउटी मोडेल हो मोटर मेरो दादाभाइ जब म केटाकेटी हुँ। मेरो यो मोटरको धेरै मनपर्दो सम्झनाहरू थिए र एक वर्षको लागि बहाल गर्न चाहन्थे। अन्तमा, मित्रले मलाई यो मोटर दिनुभयो किनभने यो यसको प्रयोग गर्न धेरै पुरानो छ। उनी मेरो प्रतिक्रियाले जान्दथे जब मैले पहिले देखेको छु कि म यसलाई ठीक गर्नेछु, त्यसैले त्यो राम्रो चलिरहनेछ र राम्रो प्रयोगमा राख्नेछु। यो मोटर दुई वा तीन वर्षको लागि ट्यांकमा भण्डारण गरिएको भण्डारण गरिएको थियो। मैले यो पुरानो ग्याँसको साथमा जीवनलाई अड्क्यो, तर मलाई लाग्यो कि यो राम्रो धुन-अप चाहिन्छ। यो कार्बोरेटर ले पनि ग्याँस लियो। मलाई विश्वास छ कि जब मैले यो मोटर ट्युन अप गर्दैछु, यो सबै बिट चलाउछ साथै यो नयाँ थियो जब यो। तपाईं यी मोटरसाइकलहरू $ 150 देखि $ 200 को ई-बेमा खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। यदि भागहरूमा $ 100 वरिपरि खरिद गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, तपाइँ यसलाई धुन गर्न सक्नुहुन्छ र यो नयाँ जस्तै चलिरहेको छ। धुन-अपका लागि भागहरू बिना, मैले यो प्रक्रियालाई दस्तावेजको रूपमा वर्णन गर्नुभएका कारणहरूका लागि सही कहिल्यै चल्दैन।
को मा उपयोगी मान्छे iboats.com नौका विहार फोरम यो मोटर बारेमा निम्न जानकारी प्रदान।
Evinrude मोडेल 3302:
हिमाचल प्रदेश: 3
विस्थापन: 5.28 cu.in. = 86.5 CCM
वजन: 34 एलबीएस। = 15.4 किलोग्राम
गियर अनुपात: 17: 28
स्पार्क प्लग: च्याम्पियन J6C .030 मा gapped "(J6J अब उपलब्ध छैन)
तल्लो एकाइ तेल: OMC / BRP 'HiVis' वा Walmart, आदि बाट बराबर 80 / 90W जहाज को बाहिर gearcase तेल
इन्धन / तेल मिश्रण: 24: TC-W1 जहाज को बाहिर तेल गर्न 873octane ग्याँस (एसएई 30w बारेमा भूल)।
जब म यो मोटर छुटेको छु, म कपडाको साथ सबै कुरा सफा गर्न र क्लीनर स्प्रे गर्ने योजना बनाउँछु। यसको लागि धेरै विशेष क्लीनरहरू उपलब्ध छन्, तर म सिंक अन्तर्गत मैले साधारण परिवार क्लीनर प्रयोग गरिरहेको छु। आशा छ, यो मेरी पत्नीले यो छुट्याउनु अघि म फर्केर आउनेछु। म पनि तिनीहरूलाई अलग लिँदा यो खण्ड व्यवस्थित राख्न योजना पनि।
मोटर जिल्लाहरू बन्द लिन - यहाँ क्लिक विवरण लागि।
शक्ति हेड - तपाईंले आफ्नो ट्युन-अप मोटरमा निर्णय गर्नु अघि, तपाइँ निश्चित गर्न चाहानुहुन्छ कि मोटर अफ हुनेछ र तपाईसँग दुवै सिलिन्डरहरूसँग सम्पीडन छ। यदि मोटरले फ्लाईवाहेल बदल्नु हुँदैन वा यसलाई सम्पीडन लाग्दैन भने, त्यसपछि तपाईंको मोटर एक सरल ट्युन अप भन्दा बढी चाहिन्छ। तपाईं निर्णय गर्न हुनेछ कि तपाईं कसरी आफ्नो मोटर तय गर्न चाहानुहुन्छ र कतिन्जेल तपाइँको मेकानिकल क्षमता ले तपाईले कस्तो चासो लिनु हुन्छ। एक धुन अप धेरै सजिलो छ। नि: शुल्क पिस्टनहरू र सम्पीडन पुनर्स्थापना कठिनाईको मध्यम स्तरमा र यो लेखको दायराभन्दा बढी छ। म भन्न चाहन्न कि मोटर मोटर तय गर्न सकिँदैन वा फिक्सिंग लायक छैन तर म यस लेखको लागि मोटर चलाइरहेको छु, यो आवश्यक छैन। अर्को लेखमा, मैले जस्टन 15 एचपी मोटरमा पिस्टनहरूलाई मुक्त गर्न र यसलाई एउटा नयाँ जीवन दिन्छ। तपाईँले आफ्नो $ 1 20 वा $ 30 को लागी तपाईंको स्थानीय ओटो भाग भण्डारमा कम्प्रेशन गेज प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईं स्टार्टर रस्सी र स्टार्टर रस्सी ह्यान्डल बदल्न चाहानुहुन्छ। आवश्यक भएमा स्टार्टर रिकोल वसन्त बदल्न पनि सम्भव छ। यी सबै भागहरू अझै उपलब्ध छन् तर यो परियोजनाको लागि आवश्यक थिएन।
कार्बोरेटर - तपाईं एक समय को लागि वरिपरि बसे एउटा पुरानो मोटर छ कुनैपनि समय, तपाईं कार्बोरेटर सेवा आवश्यक छ कि मान गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी जब तेल मिश्रित ग्याँस, वार्निश वा अन्यथा गम तपाईँको कार्बोरेटर बारी हुनेछ। सफाई कार्बोरेटर धेरै additives तपाईं कार्बोरेटर मा सीधा आफ्नो इन्धन ट्यांक राख्नु वा स्प्रे गर्न सक्ने छन्, जबकि, तिनीहरूले एक कार्बोरेटर धुन-अप जस्तै कुरा पूरा नजिक आउनेछ। मोटर को कार्बोरेटर मा इन्धन बिना भण्डारण थियो भने पनि, gaskets बाहिर भोकमरी र दरार वा एक पटक फेरि प्रयोग गर्न प्रयास चाँडै deteriorate सक्छ। को कार्बोरेटर राम्रो काम गर्न जाँदै छ सुनिश्चित गर्न मात्र तरिका, हटाउन, आफैँ खोल्ने सफा र नयाँ भागहरु संग reassemble, प्रतिस्थापन, र जो एक कार्बोरेटर धुन-अप प्रदर्शन गर्न कदम हो छाँटकाँट छ। यहाँ क्लिक विस्तृत फोटो र कार्बोरेटर यो मोटर लागि धुन-अप प्रदर्शन को लागि प्रक्रियाहरु लागि।
ज्वलन प्रणाली - यो स्पार्क प्लग र प्लग तार को अपवाद संग, ज्वलन सिस्टम को सबै चक्का अन्तर्गत स्थित छ। को प्रकार Magneto यो मोटर मा ज्वलन छ ब्रेकर अंक Magneto चक्का। को को काम ज्वलन सिस्टम पर्याप्त उत्पन्न गर्न छ भोल्टेज (20,000 वोल्ट वरिपरि) हाम फाल्न गर्न खाली माथि स्पार्क प्लग एक स्पार्क सिर्जना र र इन्धन / हावा मिश्रण igniting र भोल्टेज बिल्कुल सही संग स्पार्क प्लग वितरित छ सुनिश्चित गर्न समय यहाँ क्लिक को प्रदर्शन को लागि विस्तृत फोटो र प्रक्रियाहरु लागि ज्वलन सिस्टम धुन-अप यो मोटर लागि।
प्ररित गर्नेवाला र तल्लो एकाइ -
ट्यांक परीक्षण - छैन ठ्याक्कै एक परीक्षण ट्यांक, म एक 55-गैलन बैरल अप भर्न गर्नुभयो, किनारा मा मोटर रचनाहरू र यसलाई आगो। तपाईं सबै पानी बाहिर मोटर चलाउन चाहन्न, र यो मोटर मा कान Muffs राख्न कुनै राम्रो तरिका हो, त्यसैले यसलाई परीक्षण गर्न पानी वा केही ट्यांक को एक शरीर मा एक डुङ्गा मा त छ। म मोटर भनेर सम्बोधन गर्न आवश्यक केही समस्या थिएन किनभने म एक ताल मा प्रयास गरेनन् यो खुसी छु। यो मोटर चलाई को बारेमा एक मिनेट पछि तातो प्राप्त हुनेछ र म अघि क्षतिग्रस्त हुने यो बन्द थियो किनभने पानी सिलिन्डरहरु वरिपरि परिसंचारी थिएन कि बाहिर गरियो। किनभने पानी तल्लो एकाइ मा सानो आउटलेट बन्दरगाह बाहिर छिडकाव थियो यो तात्दै समस्या छैन तुरुन्तै स्पष्ट थियो। म मोटर तातो चलिरहेको थियो आशङ्का गर्दा, म सिलेंडर टाउको केही पानी splashed, र यो तुरुन्तै sizzle गर्न थाले र स्टीम गर्न लागे। यो चलिरहेको बेला यो वरिपरि 212 डिग्री फरेनहाइट हुनुपर्छ गर्दा टाउको कम्तिमा 150 डिग्री फरेनहाइट थियो चाहनुभएको। निराश हुँदा, म तल मोटर बन्द र यो सुरु र यो फेरि फेरि चलाउन अघि शांत दिनु बुद्धि थियो खुसी थियो।
शीतलक प्रणाली संग तात्दै समस्याहरू फिक्सिंग - यो बिन्दु सम्म, म मोटर उल्ट्याउनु थियो किनभने सिलेंडर टाउको झिकेर र राम्रो सङ्कुचन गर्न देखिन्थ्यो थियो। मोटर तात्दै संग, यो म पत्ता लगाउन पानी शक्ति टाउको मार्फत परिसंचारी थियो किन छैन गहिरो खन्न छ भनेर स्पष्ट थियो। कृपया क्लिक गर्नुहोस् यहाँ यो प्रक्रिया को विवरण बारे पढ्न।
थप ट्यांक परीक्षण - फिर्ता जा र ठंडा सिस्टम संग समस्या फिक्सिंग पछि, यसलाई फेरि केही ट्यांक परीक्षण गर्न समय छ। मेरो ट्यांक एक सरल 55-गैलन बैरल शामिल थिए। मरम्मत पसलहरूमा धेरै ठूलो परीक्षण ट्यांक हुनेछ। धेरै पानी माथि खोल्दै बिना मोटर मा एक लोड राख्न पनि परीक्षण साजसज्जा हुनेछ। यो एउटा सानो मोटर भएकोले, म अगाडि गए र मा prop बायाँ र पानी बैरल मा मोटर अप निकाल। मेरो पहिलो चासो मोटर गरम करना भने हेर्न थियो र मेरो राहत गर्न, यो गरे। सुरुमा, मोटर coughed छ र sputtered र नीलो धुवाँ को एक विशाल बादल सिर्जना लगातार चलाउन जस्तो छैन। म त म ग्याँस ट्यांक साफ हुनत, त्यहाँ शायद कार्बोरेटर मा रही केही कणहरु थिए भनेर बुझे। एक समय को लागि मोटर चलिरहेको पछि, म कार्बोरेटर कचौरा र कम गतिको जेट झिकेर र तिनीहरूलाई साफ। म यो प्रक्रिया धेरै पटक दोहोर्याइएको। यो मोटर चलाई को कम्पन छाडा सबै crud दस्तक थियो देखिन्थ्यो। यो मोटर कम्तिमा यति त्यहाँ ट्यांक र इन्धन लाइनहरु मा crud धेरै थियो 10 वा 12 वर्ष चल्न गरिएको थियो। म मोटर पहिलो खींच सुरु र धुन अप तर वास्तविकता मा, यो फेरि एक राम्रो डुङ्गा मोटर जस्तै कार्य गर्न सुरु हुनेछ अघि गर्दा लागि चलाउन थियो पछि पूर्ण चलान सपना थियो। मोटर भाग्यो को अब, राम्रो यो मा भङ्ग भइरहेको थियो भने गर्न देखिन्थ्यो। एक 55-गैलन बैरल छैन परीक्षणको लागि आदर्श यसलाई छिटो चलिरहेको बेला मोटर एकदम धार कारण हुनेछ किनभने छ। साथै, पानी मा धाराहरु मोटर गति र सुस्त भए। म कार्बोरेटर समायोजन र मोटर निष्क्रिय बनाउने प्रयास तर यो सबै भन्दा राम्रो कहीं एक ताल मा गरेको छ। म मोटर मार्फत इन्धन को एक जोडी ट्यांक भाग्यो र मूलतः यो त्यहाँ बस्न र म मेरो काम क्षेत्र साफ गर्दा3वा4घण्टा चलाउन गरौं। म मोटर ट्यांक मा पूर्ण चल्दैन गर्नुभयो भनेर चिन्तित थियो तर म मोटर, यो एक डुङ्गा र पानी खुला शरीर थियो एक पटक धेरै राम्रो व्यवहार भनेर एक मित्र आश्वासन थियो र यसलाई गरिएका रूपमा, त्यो सही थियो । मैले बल्ल म यो मोटर संग एक ताल बाहिर प्राप्त गर्न सक्छ जहाँ बिन्दु पुगेपछि म यो प्रदर्शन बाटो संग एकदम खुसी थियो। म अब धेरै पटक बाहिर यो मोटर थियो गर्नुभएको र यो ठूलो चल्छ। म ब्यूँताउन यो 42 वर्षीया मोटर पराउँछु मानिसहरू देखि compliments धेरै प्राप्त गर्नुहोस्। म काम र भविष्यमा थप मोटर्स लेख्दै गर्न तत्पर।
मोटर मत्स्य पालन लिन - यो फेब्रुअरी 27, 2009, इन्डियाना थियो तर म सिर्फ प्रतीक्षा गर्न सकिएन। म मेरो Evinrude Lightwin कछुवा क्रीक Reservoir गर्न यसलाई परीक्षण गर्न तेरे हाउते इन्डियाना बस दक्षिण लिए। कछुवा क्रीक Reservoir एक कोइला-निकाल शक्ति प्लान्ट द्वारा खुसीले गदगद छ। निम्न पढ्नुहोस् लेख मेरो माछा मार्ने यात्रा गए र कसरी मेरो मोटर भाग्यो कसरी पत्ता लगाउन।
मोटर आनन्द लिई - अब म यो मोटर ट्युन अप र दौड राम्रो छ, म यो मजा गरिरहेको छु। यो अब मई 10 हो र मैले यो मोटर बाहिर4वा5पटक छु। हरेक पटक म यसको प्रयोग गर्दछु, यो राम्रो र राम्रो चलाउन देखिन्छ। अन्तिम सप्ताहांत, आमा दिवसमा, हाम्रो परिवारले मेरो बहिनीको ठाउँमा एक राम्रो आकारको पोखरीमा एकत्रित गरेको थियो। मैले मेरो सानो माछा माछा डुङ्गा लाए जो 15 'गेहेन क्लासिक' थियो। यो डुङ्गा एक किनारा मोटर को लागि एक वर्ग फिर्ता संग एक ठूलो फाइबर ग्लास क्यानो जस्तै छ। मैले यो नाकमा 25 HP को रूपमा जितेको छु तर मैले मेरो सानो3एचपी इनिनउड लाइटविनलाई मेरो 8-वर्षीय छोरा र9वर्ष पुरानो चच्याउने कुरालाई कसरी सिकाउने कुराको बारेमा विचार गरें। केही बिन्दु पछि, मैले केटाहरूलाई छोडे र उनीहरूले सबै झ्यालहरू चल्थे। म तिनीहरूका नजरमा अर्को डुङ्गा र 25 एचपी मोटरमा बसिरहेका थिए तर केटाहरूले आफ्नै काममा राम्रो काम गरे। डुङ्गामा मात्र केटाहरू र अब धेरै कुराका साथ, डुङ्गामा 8 MPH मार्फत चले। तिनीहरू पनि मोटर सुरु गर्न सक्षम थिए। मोटर विश्वसनीय थियो र प्रारम्भिक स्टार्टअप पछि कुनै पनि समयमा पहिलो पुलमा पुन: सुरु हुनेछ। म यस सानो मोटर संग धेरै खुसी छु जुन धेरै वर्ष को उपयोग र सम्झनाहरु दिनेछ। म यसलाई मेरो साथ एक लेयर वा केटाहरूको लागि केहि महिना पछि क्यानाडामा क्यानाडामा माछा पकडने यात्रा गर्न को लागी यो योजना पछि यो महिना। यो अब मेरो समय अन्य मोटर्समा मेरो ध्यान घुमाउनको लागी म यहाँ छ जो निश्चित र दस्तावेज गर्न आवश्यक छ।
क्यानाडा मा मत्स्य पालन